पुरुष चाहन्थे लागि चिनियाँ करोडपति एकल महिलाहरु - तार
पुरुष चाहन्थे लागि चिनियाँ करोडपति एकल महिलाहरु — तार
जनी, को सीईओ को अनलाइन डेटिङ सुरु-अप (म चाहनुहुन्छ एक मानिस), आफ्नो खोज गत महिना र लक्ष्य लिएको लगाउन उपयुक्त पति लागि केही सबैभन्दा योग्य मा महिला आधुनिक चीन । महिला समावेश, अचल सम्पत्ति र विनिर्माण देखि सिचुआन प्रान्त जो गर्न असमर्थ भएको छ श्री दायाँ पाउन बावजुद, वा सायद किनभने, आफ्नो गुब्बारों बैंक-संतुलन । मलाई विश्वास छ यो पहिलो पटक त्यहाँ भएको छ, यस्तो योजना मात्र लागि अनुकूल धनी महिला, श्री भन्नुभयो दैनिक तार यस सप्ताह गर्न एक यात्रा समयमा, संघाई शहर को एक, उहाँले दोहन लागि संभावित. डेटिङ छ ठूलो व्यापार मा चीन, एक देश भन्ने छ घर केही लाख-एकल मान्छे । प्रारम्भिक यस वर्ष को संस्थापक को एक चीन सबैभन्दा ठूलो अनलाइन डेटिङ साइटहरु भन्नुभयो स्थानीय टेलिभिजन आफ्नो कम्पनी बनाउने थियो वार्षिक मुनाफा को £ लाख देखि आफ्नो लाख दर्ता प्रयोगकर्ता छ । तर एक एक देश मा कुख्यात लागि एक नाटकीय लिङ्ग असंतुलन छ भनेर निन्दा लाखौं मानिसहरू एकल-जीवन, सबैभन्दा एजेंसियों मा ध्यान ठिक प्रेम जीवन को चिनियाँ मानिसहरू । पनि सरकार देख्नुहुन्छ मदत पुरुष प्रेम पाउन एक प्राथमिकता रूपमा. गत महिना मानिसहरू दैनिक अखबार कि यस्तो चेतावनी दिए, र सामाजिक सद्भाव र स्थिरता हुन सक्छ धम्की भने लाखौं ग्रामीण मानिसहरू असमर्थ थिए साझेदार पाउन. तर चीन सुपर-धनी महिला सामना गर्दै समस्या को आफ्नै, श्री, छैन कम से कम समय भेट्टाउने लागि स्काउट-हुनेछ.
तिनीहरूले सधैं घेरिएको व्यापार मान्छे वा ग्राहकहरु, पूरा गर्न राम्रो मान्छे बाहिर आफ्नो तत्काल सर्कल । धनी मानिसहरू जरूरी चाहँदैनन् एक पत्नी रूपमा सफल रूपमा. तिनीहरूले चाहनुहुन्छ एक असल पत्नी अनि असल आमा, तर तिनीहरूले छैन जरूरी चाहनुहुन्छ सफल महिला तिनीहरूले लाग्छ किनभने, त्यो समय धेरै खर्च मा व्यापार तर परिवार मा.
एकै समयमा धनी महिला एक उच्च मानक छान्ने मा आफ्नो पति
किनभने तिनीहरूले धेरै सफल, तिनीहरूले पनि आशा आफ्नो पति हुन कम्तिमा रूपमा सफल तिनीहरूले छन् रूपमा. चेन, जो मा एक कान्छो चेंगदू-आधारित करोडपति लागि साइन अप गर्न परियोजना, भन्नुभयो सामाजिक मान्यता पनि एक धनी महिला को खोज को लागि सिद्ध मानिस हो । मानिसहरू एक धेरै उच्च सफलता दर मा भेट्टाउने प्रेम र एक धेरै व्यापक चयन देखि, तिनीहरूले रोज्न सक्नुहुन्छ कसैले देखि एक कम सामाजिक समूह, चेन, जसको परिवार नियन्त्रण एक चेंगदू सम्पत्ति र होटल साम्राज्य छ । महिलाहरु को लागि, यो लगभग असम्भव छ छनौट गर्न तल आफ्नो परिवार र साथीहरू अनुमोदन छैन, र तिनीहरूले धेरै सामना कठिनाइहरू । श्री लागि शिकार योग्य संग एक सहयोग हङकङ-आधारित डेटिङ एजेन्सी फेंग भयोंग, मा थाले जुन जब उहाँले थाले लिएर अनलाइन आवेदन मार्फत चीन र दुनिया. त्यसैले सम्म, वरिपरि मानिसहरू साइन अप छन्, सहित एक अष्ट्रेलियन र धेरै आवेदकहरुको देखि अमेरिकी र क्यानाडा. बेलायत आधारित स्नातकहरूको को प्रसिद्ध ब्रिटिश विश्वविद्यालयहरु पनि थियो लागू, उहाँले भन्नुभयो । चरण दुई को खोज मा सुरु हुनेछ जब जुलाई आयोजकहरु सुरु माध्यम र जाँचबुझ-हुनेछ पति मा एक श्रृंखला को अनुहार-गर्न-अनुहार सभाहरूमा संग सम्बन्ध विशेषज्ञहरु र भाग्य- होटल मा चीन वरिपरि छ । एक सूचीमा पुरुष आमन्त्रित गरिनेछ मा एक सबै-व्यय-भुक्तानी यात्रा गर्न चेंगदू मा अगस्ट, चीन वैलेंटाइन्स दिन, खाने को लागि मिति संग महिला, सबै बीच वृद्ध र । प्रतियोगिता लागि एक ठाउँमा तालिका मा भीषण हुनेछ । एक न्यूनतम मानक, शिक्षा र एउटै उमेर वा वृद्ध भन्दा प्रेम- करोडपति छ । तिनीहरूले लागि देख छैन, श्री, जो छ, र धारण एक मास्टर गरेको डिग्री मा ईन्जिनियरिङ् विश्वविद्यालय देखि मिनेसोटा तर उहाँले खुसीसाथ विवाहित दुई छोराछोरी संग. तिनीहरूले लागि देख रहे जो मान्छे धेरै परिपक्व छन्, समझ र धेरै सहयोगी, हास्य एक अर्थमा संग र राम्रो स्वाद र कसले कसरी थाहा गर्न जीवनको आनन्द उठाउन र इमानदार छन्. एक स्वाद लागि महजोंग एक्स एक परम्परागत चिनियाँ जुवा खेल एक्स थियो भने पनि हुन्छ, उनले भने । महजोंग एक धेरै लोकप्रिय फारम, मनोरञ्जन मा सिचुआन र चेंगदू । यो भाग को दैनिक जीवन छ । सुश्री चेन, जो मा जन्म भएको थियो, उरुम्की, मा सुदूर-पश्चिमी चीन, भने उनको आदर्श मानिस हुन आवश्यक मिलनसार, उदार, बलियो, र संवादी. उहाँले पनि पैसा आवश्यक छ । उहाँले केही गर्नुपर्छ आर्थिक शक्ति, कम से कम मिलियन युआन मा सम्पत्ति देखि, सबै मेरो मित्र भनेर धेरै पैसा वा अधिक र व्यक्तिगत धन को एक प्रतिबिम्ब छ एकीकृत क्षमता छ । उहाँले आवश्यक छ राम्रो नैतिकता र स्वस्थ जीवन शैली. आवेदकहरुको पनि हुनुपर्छ तयार गर्न नया ठाउमा सार्नु गर्न चेंगदू, एक तेजी बढ्दै शहर, वरिपरि किलोमिटर पश्चिम को संघाई, आगोको भोजन र हवाई र कार विनिर्माण उद्योग । मानिसहरू लागि खोजी एक करोडपति कल गर्न, आफ्नै चेंगदू, घर लगभग मिलियन मान्छे, छ एक खराब ठाँउ सुरु । क्षेत्र अनुभव छ आर्थिक वृद्धि देखि बेइजिङ थाले यसको पश्चिम जाने ड्राइव विकास गर्न चीन भित्री मा छ । गत वर्ष चेंगदू अर्थव्यवस्था गयो । जबकि शहर नयाँ शताब्दीका वैश्विक केन्द्र, एक व्यापारिक र अवकाश जटिल हुनेछ भनेर हुन संसारको सबै भन्दा ठूलो अडान-एक्लै भवन, खोल्न सेट छ पछि यो वर्ष । भू-मध्य-थीमाधारित जटिल घमन्ड दुई लक्जरी, -कोठा होटल, तातो पानीका मुहानहरू, एक समुद्री पार्क र यसको आफ्नै कृत्रिम समुद्र तट. अनुसार एक धनी-सूची द्वारा संकलित संघाई आधारित लक्जरी प्रकाशक बकुल्लो, चीन को धनी, व्यक्तिहरूलाई मा आधारित छन् सिचुआन प्रान्त गर्दा बस्न यसको राजधानी चेंगदू । सिचुआन प्रान्त छ को उच्चतम नम्बर को मान्छे बीचमा चीन धनी छ । पछि आर्थिक सुधार मा चीन मा धेरै मान्छे को सिचुआन भए धेरै धनी छ, दुवै पुरुष र महिला, श्री औंल्याए । र पनि, सिचुआन बालिका प्रसिद्ध छन् भएकोमा धेरै र पनि स्मार्ट, परिश्रमी र बुद्धिमान ।
← कहाँ पाउन गर्न चिनियाँ महिला लागि विवाह - अन्तर्राष्ट्रिय डेटिङ सल्लाह लागि खोजी पुरुष विदेशी ब्राइड्स
डेटिङ गर्दा एक छ अनलाइन-कोरिया-क्यामेरा. एक दुर्घटना →